Yokuhlanza refueling air isimo
Air conditioning - kudivayisi ewusizo kakhulu. Siyabonga kuye travel imoto, ikakhulukazi olude, ekubeni kube mnandi futhi elula. Ikhaya zikagesi ukunikeza induduzo Kushisa futhi sultry. Kodwa njenganoma iyiphi enye idivayisi, zidinga njalo futhi ukulungisa. Ngezikhathi ekuhlanzeni refueling we conditioner emoyeni. Le sevisi inikezwa amasevisi ezikhethekile. Kodwa ngaphansi okuthile azani namakhono kuzo zonke lezi zindlela, ungakwazi ngokushesha enze wezandla zakho.
Izimbangela amaphunga kusukela conditioner emoyeni
Iqiniso lokuthi into idinga ukuhlanzwa, ungabika nephunga sici Amapayipi emoyeni. Kunezizathu eziningana ezibangela lokhu mkhuba. Ngokuvamile, air conditioning inuka ngenxa ukwakheka kwi evaporator amagciwane athile kanye isikhunta. Uma idivayisi epholisa emoyeni ngesikhathi evaporator, esemgwaqweni heater iyunithi, aqoqana izintuli nokungcola kanye emoyeni. Futhi, ukufingqa ku Amapayipi emoyeni. Ngaphezu air Amapayipi kanye ukufingqa liyavela evaporator, kanye ngaphakathi kwalo. Manzi - kuyinto medium esihle kakhulu Lokusakaza nezilwanyana ezincane ezihlukahlukene, okuyizinto imithombo iphunga.
Izindlela kanye nezinhlobo umsebenzi yokuhlanza
conditioner yokuhlanza inqubo ingase ibe zamakhemikhali noma lokukhanda. Indlela elula yokwelapha amakhemikhali kuhilela ukusetshenziswa wokuhlanza yokufutha izinyawo noma Foam imikhiqizo. Ngaso sonke isikhathi kufanele uKhumbule ukuthi kuphela ofanele lokuqala magciwane. Ukwelashwa ngokwalo kufanele sigcwaliswe kuphela ukusetshenziswa Foam ukwakhiwa. yenqubo yokugaya sisetshenziswa ezimweni lapho umsebenzi amalungiselelo zamakhemikhali asizange siveze umphumela kulindeleke. Indlela awayindwayo eliyinkimbinkimbi kakhulu. Ihilela Ukudilizwa evaporator. Futhi, uma kunesidingo, kungaba refueled kanye conditioner emoyeni, ngoba zezikhali.
ukwelashwa Chemical kanye amalungiselelo adingekayo
Kukhona yisisindo esikhulu abakhiqizi, ngayo nefunda ngayo ungakwazi ukunqoba ikoloni amagciwane athile kanye isikhunta esimweni sezulu futhi ususe nephunga. Ngokuvamile-ke izifutho magciwane noma Foam ukuhlanza isimo emoyeni nge tube obude obuthile.
Lapho izidakamizwa ethengwayo, kungenzeka ukuba bafeze inqubo ukuhlanzwa. Icubungula isimo sezulu sokwenziwa amagciwane Kwenziwa kanje. Uma kuba imoto, into yokuqala simila injini ke zihlanganisa conditioner emoyeni bese uqale imodi recirculation ukuze amandla ayo egcwele. Aerosol Ungasetha phambili eduze kwesiteji umgibeli esihlalweni, iphi tube air eyanele. It uhlala kuphela ukuqala atomization zomuthi. Zonke amafasitela nezicabha kumele ivalwe. Futhi kubalulekile ukuba ulinde isikhathi esithile. Ngokuvamile isikhathi sokulinda eziboniswe iphakethe.
Khona-ke vala conditioner emoyeni, ingaphakathi noma igumbi umoya kahle. Endabeni Foam, ususe isihlungi impova. Kwezinye amamodeli we imoto ke ingaphezu nje isitofu. Okulandelayo ku-ikani Foam nokupakisha tube bafake. Lokhu kwenziwa ukuze kuvinjelwe ingress Foam phezu evaporator. Khona-ke, lokhu kwakhiwa kuyadingeka ukugcwalisa zonke mapayipi. Ngaphezu kwalokho, le Foam kungenzeka iqondiswa nge izimbobo amanzi. Khona-ke, ngemva kwesikhathi esithile, lapho is ebalulwe imfundo, eqalwa conditioner futhi bavunyelwe ukusebenzisa cishe imizuzu engu-10 ezimeni ezahlukene. Ngemva kwalokhu kahle pholisa endlwaneni eyakhiwe noma igumbi.
Le nqubo kuzodinga amathuluzi athile kanye izinto. Kwenye inqubo enjalo wenziwa kanye refrigerant opha refueling imoto air conditioner, umlomo wombhobho ngalinye ukugeza zonke washers. Isinyathelo sokuqala ukuqaqa kwideshibhodi ukuya evaporator. Okulandelayo uhlelo waxoshelwa refrigerant. Ngesinye isikhathi kuyadingeka ukususa isitofu ukuya ithangi sika air conditioning evaporator. Bese uyikhipha inzwa ngamunye, negenkle legatsha asinikeze kurediyetha phezu umzimba ukushisa, futhi ngobumnene ukususa kurediyetha. Into ngokwalo kufanele begeza ngamanzi nensipho. Khona-ke uhlala kuphela ukuqoqa wonke ukuthi alungise, futhi ushintshe namafutha compressor. Ungase udinge uphole up conditioner emoyeni.
Kungani bagcwalise idivayisi?
Lo mbuzo ivamise ukucelwa ngezinye abantu abavamile abangalwazi ngedivayisi yaleli su. Futhi kuyiqiniso, kungani, ngoba kakade nomkhiqizi uye esakhiwe iyunithi? refueling engeziwe ayidingeki ukuze isimo esisha emoyeni, kodwa ngokuhamba kwesikhathi refrigerant eshiya. Imbangela ukuvuza kungenzeka ukufakwa ayilungile, ahlukahlukene mechanical umonakalo amapayipi noma amashubhu. Lokhu kuyiqiniso hhayi kuphela ngenxa yezimoto emoyeni conditioners, kodwa futhi ngoba yasekhaya yokuhlukanisa izinhlelo. Ngokuvamile, ngenxa izinkinga ezisenza compressor okweqile kungenza igoqe izakhi antivibration nokuxhumana, okuyothi ngalo refrigerant ageleza. Izingxenye ukukuthinta ngokumelene nomunye. Ngokuvamile, basuke wesula kahle, bese kuthi igesi ekhethekile ubaleka nje emoyeni.
Imiphumela ukuvuza Freon
Lapho inani refrigerant kuyehla noma eshiya lonke, akuseyona azizwa umehluko phakathi emoyeni ongaphandle kanye zasendlini ngezinye idivayisi yokusebenza. Ngaphandle yamathebhu iyunithi akakwazi kuphole emoyeni. Kuzosiza ukuxazulula inkinga refueling iyunithi. Kodwa kufanele uqale ukufuna imbangela ukuvuza. Uma ningakwenzi lokhu, khona-ke ngemva kwesikhathi esithile lo refrigerant eshiya futhi isimo sezulu iyayeka ukusebenza.
Ngokusebenzisana Freon 410-m
Freon R410A uphawu siqukethe izingxenye ezimbili. izici zayo ngokomzimba zihluke nezinye refrigerants. Umehluko - in the abilayo. Ngakho-ke refueling conditioner Freon 410 has izici zayo siqu. Ngokungafani R22 ingxenye emamaki angasetshenziswa e liquid ngefomu gaseous, R410 is threaded kuphela isimo uketshezi. Lokhu kuqinisekisa isilinganiso yezingxenye ezimbili ingxube isilinganiso eyodwa kwenye. Yileyo indlela refrigerant uzoba nokusebenza kangcono. Refueling le conditioner emoyeni ngezandla zakho kanje. Isinyathelo sokuqala ukuxhuma isevisi port kudivayisi ezininginingi ekhethekile. Okulandelayo, refrigerant kukhishelwa ngokugcwele kusukela wesifunda. Khona-circuit is bashiye futhi agcinwe isikhathi esithile kule wombuso. Ngemva kwalokho, ama-apharathasi usolwa, ngesisindo.
Refueling usebenzisa Freon-410
Refueling conditioner Freon-410 is hhayi Kunconywa. Abakhi imishini HVAC belulekwa uqhatha zonke refrigerant ngokuphelele, bese kabusha injected uhlelo olusha, uma kunesidingo. Nokho, ngale ndaba, kukhona izingxabano eziningi. Ezinye izinkampani wahlanganyela isevisi imishini HVAC ukunciphisa ukulungisa izindleko, ukunikela refueling. It ikhiqizwa uma ukuvuza ingeqi angu-20. Babbitt imithetho ukuthi abazi. Futhi kunqunywa ingcindezi kumjikelezo kanye nemvelo. Kule kusobala ukuthi kungcono ukuphathisa nokugcinwa of air conditioning ochwepheshe. Refueling imoto air conditioner, noma kungaba imizuzu 410 freon futhi kwenziwe nge ukuhoxiswa egcwele Freon ubudala.
Modern imishini air conditioning kungenziwa eziqhutshwa ngokuzimela. Nokho, qaphela ukuthi akuzona zonke izinkinga esiba zingaxazululwa ngesandla. Ngokwesibonelo, kungenzeka yokuhlanza kanye refueling we conditioner emoyeni uma ligcwele refrigerant efanelekayo. Kodwa ukuze bafeze izinkinga eziningi ezinkulu kufanele ochwepheshe kuphela.
Lapho ithengiswe brushcutter, ukubuyekezwa idlala indima ebalulekile isinqumo lokuthenga
Kusukela "Ariston" amanzi heater: ukubuyekezwa kanye imicabango yabantu
Le ndlu kubanda ukwenza futhi kanjani ukuba igweme izinkinga ezinjalo?
Incazelo, umqondo kanye ngezigaba amaqembu amancane: ithebula
Indlela yokwenza ihhashi ngebumba - a enemininingwane master ekilasini
Izinhlobo ubuthi futhi yini ukuthatha uma kwenzeka ubuthi.
Izindawo ezithakazelisayo ekhatsi Kiev sishaywe umoya. Izindawo ezithakazelisayo eziningi e Kiev
Zinovy Vysokovsky - pan ongenakulibaleka Zyuzya
Ubuciko of izincwadi nezifinyezo. "Mirgorod" Gogol
"Indawo yokudlela Shabolovka": okumnandi, zikanokusho ethokomele!